Adobe Premiere Pro | January 2020
Ụzọ iji cheta akwụkwọ ozi na Mail.Ru Mail
Editor Si NhọRọ January 19,2020
Isi Adobe Premiere Pro
Kedu esi emepụta isi na Adobe Premiere Pro
Aha ndị dị iche iche dị na vidio ahụ, n'ọtụtụ okwu ndị dị ndụ. Iji mepụta ha, enwere ọtụtụ mmemme ndị dị iche na ọrụ ha. Otu n'ime ha bụ - Adobe Premiere Pro. Ọ nwere ike ịmepụta ọkpụkpọ aha, yana oke ntakịrị mmetụta. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ bụ ịmepụta ihe ka njọ, mgbe ahụ ngwá ọrụ a agaghị ezu.
Esi gbanwee asụsụ n'asụsụ Adobe Premiere Pro
Nbudata Adobe Premiere Pro na asụsụ ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ Bekee, ndị ọrụ na-eche ma enwere ike ịgbanwe asụsụ a na otu esi eme ya? N'ezie, na Adobe Premiere Pro enwere ike ime otú ahụ. Otú ọ dị, usoro a adịghị arụ ọrụ na nsụgharị niile nke usoro ihe omume ahụ. Download Adobe Premiere Pro Olee otú ị ga-esi gbanwee asụsụ ogbi nke Adobe Premiere Pro site n'asụsụ Bekee na Russian Mgbe ị mepere windo mmemme ahụ, ị ​​gaghị ahụ ntọala ọ bụla maka ịgbanwe asụsụ ahụ, dịka a na-ezobe ha.
Esi eweputa ngwa ngwa ma ọ bụ gbaa ọsọ vidiyo na Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro - usoro dị ike iji dozie faịlụ vidiyo. Ọ na-enye gị ohere igbanwe vidio mbụ ahụ karịa ka a nabatara. O nwere ọtụtụ atụmatụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbazi agba, mbubata utu aha, ịmepụta na idezi, ọganihu na nduhie, na ndị ọzọ. N'isiokwu a, anyị ga-emetụ aka n'isiokwu nke ịgbanwe ọsọ nke faịlụ vidio ebudatara na mpaghara dị elu ma ọ bụ dị ala.
Egwuregwu Nchịkọta Video na Adobe Premiere Pro
Mmehie nchịkọta nke Adobe Premiere Pro bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. A na-egosipụta ya mgbe ọ na-agbalị ịbupụ ọrụ e kere eke na kọmputa. Usoro nwere ike ịkwụsị ozugbo ma ọ bụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Ka anyị hụ ihe bụ okwu ahụ. Download Adobe Premiere Pro. N'ihi gịnị ka njehie na-eme na Adobe Premiere Pro? Codec njehie. Ọtụtụ ugboro, njehie a na-adabere na nhazi usoro dị n'etiti mbupụ na codec ngwugwu arụnyere na usoro.
Otu esi eji Adobe Premiere Pro
A na-eji Adobe Premiere Pro mee ihe maka ntinye ederede ọkachamara na ntinye dị iche iche. O nwere ọtụtụ ọrụ, ya mere, interface ahụ dị mgbagwoju anya maka onye ọrụ ọhaneze. N'isiokwu a, anyị ga-elele ọrụ na ọrụ nke Adobe Premiere Pro. Download Adobe Premiere Pro Ịmepụta Ụlọ Ọhụrụ Mgbe ị malitere Adobe Premiere Pro, onye ọrụ ga-akpali ịmepụta ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ gaa n'ihu na otu.
Otu esi eme ka mmezi agba na Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro bụ ngwá ọrụ na-enye aka nke na-enye gị ohere ịme ihe dị iche iche na vidiyo. Otu n'ime atụmatụ ya bụ ntụzi agba. Site n'enyemaka ya, ị nwere ike ịgbanwe agba agba, nchapụta na saturation nke vidiyo dum ma ọ bụ akụkụ ya. Isiokwu a ga-eleba anya n'otú esi eji agbazi agba na Adobe Premiere Pro.
Ihe nkwụnye ntinye bara uru mgbe ị na-arụ ọrụ na Adobe Premiere Pro CC
Mgbe ị na-amalite usoro Premiere Pro maka oge mbụ, ihe mbụ ị na-ele anya bụ ọtụtụ akụkụ na akara ngosi dị iche iche, nke ọ bụla n'ime ha na-arụ otu ọrụ. Otú ọ dị, mmezu nke ụfọdụ n'ime ha na-ewe oge dị ukwuu. Iji mee ka ọrụ ahụ dị mfe, usoro ntanetị dị iche iche. Enwere ike ibudata ha ngwa ngwa site na saịtị ahụ.
Otu esi echekwa vidiyo na Adobe Premiere Pro
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Adobe Premiere na ntakịrị nghọta banyere ọrụ na interface, kere ọrụ ọhụrụ. Na otu esi echekwa ya na komputa gi ugbu a? Ka anyị lee anya n'ụzọ zuru ezu na esi eme nke a. Download Adobe Premiere Pro Olee otú iji chekwaa ọrụ a rụzuru na kọmpụta Mbupu mbupụ Iji zọpụta vidiyo na Adobe Premier Pro, na mbụ, anyị kwesịrị ịhọrọ ọrụ na Time Line.
Egwu vidiyo na Adobe Premiere Pro
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhazi vidio ọ bụla na Adobe Premiere Pro, e nwere mkpa iwepụ ihe vidiyo ahụ, sonyere ha ọnụ, n'ozuzu, na-edezi. Na mmemme a, ọ naghị esiri ike ma onye ọ bụla nwere ike ime ya. M na-agwa gị ka ị tụlekwuo otu esi eme ya. Ibudata Adobe Premiere Pro Ebubi Iji wepụ akụkụ ahụ na-enweghị isi nke vidiyo ahụ, họrọ ngwá ọrụ pụrụ iche iji kpochapụ "Ngwa Mgbapụta".
Savefrom.net maka Google Chrome: ntụziaka maka iji
Weghachite ehichapụ ihe oyiyi na gam akporo
Yandex.Store maka gam akporo
Ngwa maka free download nke egwuregwu na gam akporo
Isiokwu a ga-ekwu maka nsụgharị nke ndị na-ewu ewu antiviruses, nke dị mma maka iji, na-echebe kọmputa gị site na nje na mberede ọgwụgwọ nke nje virus ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na antivirus gị anaghị ahụ egwu ọ bụla, ịnwere ike iji nsonaazụ free nke antivirus a ma ama ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọnụnọ nke malware enweghị ịzụ otu ọhụrụ. GụKwuo
Wepu egwu egwu na Sony Vegas
Mepee ọdụ ụgbọ mmiri na Windows 10 firewall
https://termotools.com ig.termotools.com © Adobe Premiere Pro 2020